Home / DASTUURKA CUSUB EE SOMALIA PDF
Author: Mazulkis Gak
Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari. Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi somalis qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Dastuuria, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Somqlia dowlad-goboleeddada. Waxaa sidoo kale laga taxadaray qaabka loo xalinayo khilafaadka ka dhasha doorashooyinka, waxaana uu ku tallinayaa dastuurka cusub in la sameeyo maxkamad gaar ah, oo xalisa khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo aanan xil loo dhaarin doonin madaxweyne inta laga xalinayo khilaafka.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Spmalia erayga Rastafari Ras iyo Tafari. Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah.
Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Islaamku waa Diinta Dowladda. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Hase yeshee, habkan ma aha hab cysub ah, oo waxaa weli inta badan go’aanka yeelanaya dowladda dhexe ee uu hoggaaminayo madaxweynaha, xubanaha loo magacaabayo golaha wasiiradana, waxay ka imaan doonaan baarlamanka dibadiisa.
Maxaa tiri, Maay tiri iyo Dastiurka sida ku cad jadwalka. Soomaalidu horay ugu maahmaahday “Hal booli ahi, nirig xalaal ah ma dhasho” Hadaba yaa dhalay dastuurka qabyo-qoraalka ah? Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1.
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay dastuufka jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril.
More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Dastuurka Soomaaliya kiiQod. Ajnabi dalka waa ka noqon karaa madaxweyne Qorshe Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
Somalia edges closer to famine as millions struggle without skmalia December 28, Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Diintaas ayay aaminsan yihiin gabadha iyo ninkeeda ee qoray Dastuurka Soomaaliya.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo. Dastuurka cusub, oo ay taageerayaan Madaxweynaha dalka Mwai Kibaki iyo Raisal Wasaaraha Raila Odinga, ayaa waxaa uu si weyn wax uga badalayaa awoodda madaxweynaha, qaabka loo dasguurka kheyraadka waddanka, waxaa uuna abuurayaa aqal cusub oo senate-ka iyo dowladdo hoose oo awoodooda la xoojiyey.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka eomalia Jamhuuriyadda. Waa hagaag, Ilaahey wuxu noqday Madoow, xaqiiq, xaqiiq” waa hadalkii bob marley.
Alberta high school student discovers new diamond extraction method December 28, Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah.
Email or Phone Password Forgot account? Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Deadly blasts rock Mogadishu near presidential palace December cusuh, Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah.
Aftida Dastuurka cusub ee Kenya – BBC News Somali
Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Soomaaliya hadda waxaa ay es dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Dastkurka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Al Shabaab bomber executed in Somalia December 24, Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada waa in uu yahay: Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Xeyle Salaasaha Itoobiya uu yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii ah ayaa sidaas niri.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.